गाउँले अभिनय गर्ने सुरजको वास्तविकता यस्तो,यस कारण मन पराए दर्शकहरुले उनको आवाज (भिडियो सहित) – My Blog
No Comments on गाउँले अभिनय गर्ने सुरजको वास्तविकता यस्तो,यस कारण मन पराए दर्शकहरुले उनको आवाज (भिडियो सहित)
पछिल्लो समयमा सामाजिक संजाल टिकटकमा धेरै नै रुचाइएका सुरज घिमिरे मिडिया मा आएका छन्। सामाजिक संजाल टिकटकमा उनको प्रतिभालाई धेरै दर्शकहरुले मन पराएका छन्। सुरज अहिले बुटवलमा बस्दै आएका छन्। उनको टिकटकमा रिट्ठे नामले परिचित गराएका छन् भने उनो बास्तबिक नाम भने सुरज घिमिरे रहेको छ। उनले समाजमा भएका गतिबिधिहरुलाई समेटेर भिडियो बनाउने गर्द्छन्।
सुरजमा यस्तो प्रतिभा छ कि जसलाई सधै हेरिरहु लाग्छ। सुरजले सधै गाउले परिभेशमा अभिनय गरेर सबैको मन जितेका छन्। टिकटक पाएको प्रतिक्रिया बाट उनि धेरै नै खुशी भएका छन्। जति राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छन् त्यति नै राम्रो भिडीयो हरु बनाउन थालेका छन। टिकटक बाटै उनि धेरै दर्शकका प्यारा बनेका छन्। उनले धेरै साथिहरु बनाएका छन्। मलाई यस पर्दा मा देखिन मन थियन , मलाई इडिट गर्न मन लाग्थ्यो ,पछि खालि समयमा टिकटक बनाउन थालेपछि सबैले मन पराउनु भयो।
उनले बनाएको भिडियो दैनिक लाखौले हेर्ने गर्छन भने हजारौले मन पराएका छन्। सुरजमा यस्तो प्रतिभा छ कि उनको बोलिमा जादु छ। उनको बोल्ने शैली नै धरै मानिसहरुलाई मन पर्ने गर्छ । उनले अभिनय गर्दा मात्र आफ्नो बोलिलाई परिवर्तन गर्दछन्। यस अन्तरबार्ता मा उनले धेरै नै रमाइलो तरिकाले बोलेका छन्। यस अन्तर्वार्ताको भिडियो पनि धेरै दर्शकहरुले मन पराएको र धेरै राम्रोकमेन्टसमेत गरेका छन्। mechikali khabar युटुब च्यानलबाट सार्बजनिक भएको यस भिडियो उनको पहिलो अन्तर्वार्ता हो। पुरा जानकारी यस भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।
← पेट लाग्यो ? नआत्तिनुस् यस्ता छन सजिलै पेट घटाउने ८ तरिका ! → आँखीभौँ छेड्दा एक्कासी फुल्यो अनुहार, एक हप्ताभित्रै युवतीको मृत्यु